डा. रवीन्द्र पाण्डे काठमाडौं, १८ चैत
कोरोना संक्रमणको निदान तथा उपचारमा धेरै प्रगति भइरहेको छ । छिमेकी देश भारतले कोरोना परीक्षण किटको सफल प्रयोगपछि ठूलाे सङ्ख्यामा किट निर्माण गरिरहेको छ । १ सयभन्दा धेरै कोरोना भाइरसका बिरामी भारतका अस्पतालमा उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् ।
चीनमा यसको महामारी नियन्त्रणमा आइसकेको छ । चीनले ठूलाे मात्रामा औषधि, उपकरण तथा टेस्ट किट निर्माण गरेर विश्वव्यापी सप्लाई गरिरहेको छ । कोरियामा संक्रमितको ग्राफ फ्ल्याट भएको छ अर्थात् घटिरहेको छ । जापानले संक्रमणलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ । इजरायलका वैज्ञानिकले कोरोनाविरुद्धको खोपमा ठूलाे प्रगति गरेका छन् ।
चीनमा ८६ वर्षदेखि १ सय ३ वर्षका बिरामी पनि ठीक भएर डिस्चार्ज भएका छन् । भारतमा पनि ८६ वर्षका बिरामी, जाे सुगर र प्रेसरका दीर्घ रोगी थिए, उनी निको भएर घर फर्किएका छन् । युरोप र अमेरिकामा निको भएर घर फर्किनेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको डर एकदम नगन्य छ ।
उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायतका बिरामी, जसलाई औषधि सेवनले कन्ट्रोल राखेको छ, त्यस्ता ९५ प्रतिशत बिरामी निको भएर फर्किएका छन् । कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलियो भने हाम्रो शरीरले त्यो भाइरसविरुद्ध लड्ने प्रणालीको विकास गर्छ तसर्थ उपचारको खाँचो नपर्ने हुन्छ ।
हाल संसारभर मृत्यु भएका ३८ हजारमध्ये अधिकांश व्यक्ति किड्नी फेल भएका, क्यान्सरको अन्तिम स्टेजका, एचाईभी/एड्सको औषधिले काम गर्न छाडेका तथा इम्युनोसप्रेसेन्ट रोग भएका छन् । कोरोना संक्रमण नफैलिएको भए पनि उनीहरूमध्ये ५० प्रतिशतको मृत्यु नाजुक स्वास्थ्यका कारण हुने थियो ।
नेपालमा ७ प्रदेशबाट नै कोरोना संक्रमणको परीक्षण भइरहेको छ ।अहिलेसम्म संक्रमित ५ जनामध्ये १ जना निको भइसकेका छन् भने बाँकी ४ जनाको अवस्था सुधारोन्मुख छ । सरकारले लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाएको छ । हामी नागरिक चेतनशील भएका छौँ । १ महिना यो कहर काट्यौँ भने हामीले कोरोनालाई जित्नेछौँ । सतर्क रहौँ, घरमै बसौँ ।
- जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डेको फेसबुकबाट
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत १८, २०७६, १६:०८:००